Terraria APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Terraria APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Terraria APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
Terraria APK ကိုအခမဲ့:
Terraria Apk Full Version Obb နှင့်အတူအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
Terraria Full Version အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် 2017
terraria ဗြာ 2018
Terraria Full Version Apk 2018
သင်! တိုကျပှဲ! စူးစမ်းရန်! ဆော! Terrarians သန်းပေါင်းများစွာ၏အသိုင်းအဝုိင်းကို Join!
"Terraria ဒီတော့သူကပြောတယ်ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်. ထိုသို့ Minecraft ထိုနှိုင်းယှဉ်အနည်းငယ်တစ်ဝက်ကိုဖုတ်ပုံပေါ်စေသည်။ " – အိတ်ကပ်ဂိမ်းကစားသူ
“ဤသည် Terraria အပြည့်အဝဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်, မြေပြင်ကိုတက်ရာမှတည်ဆောက်ခဲ့သည်… သငျသညျကို PC သို့မဟုတ် consoles စပေါ်မှာခစျြလြှငျ, သင်ဒီမှာကကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်။ " – Play ရန် slide
"Terraria ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ Minecraft ခြင်းဖြင့်သက်သေပြမယ့်ဖော်မြူလာတစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းယူ, တိုကျပှဲ, အရေးအကြီးဆုံးကတော့ - - immersive-ဇာတ်လမ်းပြောပြသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏အချိန်လေး " – touch ကို Arcade
**အန်းဒရွိုက် OS ကိုလိုအပ်သည် 4.0.3 နှင့်အထက်နှင့် 512MB RAM ကို (1GB ကို RAM ကိုအကြံပြု).**
***သင့်ရဲ့ device ကိုမှတ်ဉာဏ်၏ 1GB ထက်လျော့နည်းလျှင်, သင်တစ်ဦး Expanded ကမ္ဘာ့ဖလားဖန်တီးလျှင်သင်စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ. Expanded World ဖန်တီးရန် option ကို 512MB RAM ကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအတူကိရိယာများပေါ်တွင်မရရှိနိုင်။ ***
Terraria အတွက်, တိုင်းကမ္ဘာတွင်ထူးခြားသည် — မိုဃ်းကောင်းကင်ထဲမှာ floating ကျွန်းများမှ Underworld ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်အထိ. အဆိုပါမြေကြီးစွန်းမှစွန့်စားမှု, ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုလမ်းမတစ်လျှောက်တွင် villain အကြီးအကဲတွေတိုက်ဖျက်. ကမ္ဘာကြီးကိုသင့်ရဲ့ပတ္တူများနှင့်အရေးယူ-လူမှုအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်, sandbox 'Adventures ကွာရုံ pickaxe လွှဲများမှာ!
– multiplayer – ဒေသခံ Wi-Fi ဂိမ်းများကိုမှတက်ကိုထောကျပံ့4မည်သည့်မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်ကစားသမား Cross-platform!
– 1360+ သောင်မတင်ချက်ပြုတ်နည်းများ – လက်နက်များ, သံချပ်, ဆေး, နှင့်ပိုပြီး!
– 450+ ရန်သူ!
– 100+ သငျသညျစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်ဘာမှတည်ဆောက်ရန်လုပ်ကွက်အမျိုးအစားများ!
– 30+ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန်!
– 20+ အကြီးအကဲ!
– dynamic ရေ & ချြော, နေ့ / ညဥ့်သံသရာ!
– အဖြစ်အကြီးစားကမ္ဘာ Create 4200 x က 1200 အုပ်ကြွပ် (“သေးငယ်သော” PC ပေါ်မှာကမ္ဘာ)!
Terraria အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ pixel အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှမိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံအတွက်ထွင်းထုထားသည်!
တွစ်တာ @Terraria_Logic ပေါ်နှင့် 505_Games @ ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ
www.facebook.com/TerrariaOfficial မှာ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုနှင့် https လိုပဲ://www.facebook.com/505Games
www.terraria.org မှာ web ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
ဗားရှင်း: 1.2.12785 (12785)
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာလ 08, 2018
ဖိုင်အရွယ်အစား: 49 mb
Movavi မျက်နှာပြင်ကိုဖမ်းယူ Pro ကို9နောက်ဆုံး free download, crack
AirDroid APK ကိုဒေါင်းလုပ်
VLC က Stream and Remote APK ကိုဒေါင်းလုပ်
မီးသတ်တီဗီ APK ကိုဒေါင်းလုပ်များအတွက် Firefox ကို
YouTube ကို Vanced (အမြစ်) APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Terraria APK ကိုဒီနေရာတွင် Download
ဂိမ်း Hacker က APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အခမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို GAME – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ရဲတိုက် APK ကိုဒေါင်းလုပ်ထိပ်တိုက်တွေ့ – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ကမ်ဘာဦးကအဆိုပါစစ်ပွဲ: Antaria .apk ၏စစ်တိုက်အကောင်းဆုံး Apps ကပမိုဘိုင်း Download
BBM 2.11.0.18 APK ကို | အကောင်းဆုံး Apps ကပမိုဘိုင်းအတွက် Download
PandaApp v1.1 – APK ကို Download လုပ်ပါ
Pinterest APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့လူမှု APP | လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Tondo ပရီမီယံ Theme Apex နယူးက Android APK ကို 1.2
Firefox ကို Browser ကိုအစာရှောင်ခြင်း & ပုဂ္ဂလိက APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
MyNBA2K19 APK ကိုဒေါင်းလုပ် | သည်အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
files APK ကိုဒေါင်းလုပ် Go – တက်လွတ်မြောက်…
free download အဆိုပါ Microsoft က Authenticator V6
ဖီဖာ 16 Ultimate Team APK ကို EA ၏ Download…
ဟင်းချက်အားကစားပြိုင်ပွဲ APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အခမဲ့ခြင်း simulation…
သေသို့2Android အတွက် – …